Finoana sy politika Niadian-kevitra tao Fianarantsoa
Ho fitohizan'ny famelabelaran-kevitra momba ny fanaovana politika amin'ny fomba kristianina tontosa herinandro vitsivitsy izay, dia notanterahina tao Fianarantsoa ny 16, 17 ary 18
desambra teo indray ny fisintahana masina eo amin’ny sehatra politika nokarakarain'ny vondrona “Amis de Lakroa”. 13 no nandray anjara avy amin'ny antoko sy firehana samy hafa misy ao Fianarantsoa sy manerana ny Nosy, toy ny Tiako I Madagasikara, MAPAR, Tambatra ... Noresahana nandritra ny fifanakalozan-kevitra ny fifampiankinan'ny mpitondra fivavahana sy ny fahefam-panjakana. Nandray anjara tamin'ny raharaha politika ve i Jesoa ? Nahoana no voatery nosarahana ny fahefan'ny mpanjaka sy ny ara-pinoana tany aloha tany ? Inona no tena fanaovana politika ho an'ny laika manana anjara toerana eo amin'ny raharaham-pirenena ? Ireo amin'ny ankapobeny no nanaovana serasera sy fifampitoviana eritreritra mba ho fanombohana. Nivoaka tao antin'ny adihevitra ny fanekena fa manana ny toerany ao amin'ny sehatra politika ny finoana ary tsy ratsy foana akory ny fanaovana politika. Heverina hitohy amin'ny vanim-potoanan'ny karemy ny andiany manaraka amin'ity fanentanana ity.